प्रेमको व्यापकता – भावना खनाल | रक्त न्युज
प्रेमको व्यापकता – भावना खनाल
के माया गर्नलाई भ्यालेन्टाईन डे नै आउनुपर्ने हाे र ? साच्चै अब म माया गर्छु भनेर गरिन्छ र माया ? के मेरी आमाले भ्यालेन्टाइन डेका दिनदेखि मलाई माया गर्न थालेकी हुन र ? कि मेरा साथीभाइ , इष्टमित्र र आफन्तजनले अबदेखि म माया गर्छु भनेर यही दिन कुरेका थिए र मलाई माया गर्न ? के हाे आखिर याे भ्यालेन्टाइन डे ? किन ? कसका लागि अआवश्यक छ याे भ्यालेन्टाइन ?
माया त हृदयकाे झङ्कार हाे , मनकाे अनुभूति हाे , आँखाकाे सुन्दरता हाे , मुटुकाे गहिराइ हाे , माया जीवनकाे परिभाषा हाे । माया मनकाे बहाब हाे,याे स्वत: आफैं हुन्छ । कहिले , किन र कसरी हुन्छ थाहै हुदैन कसैलाई । विना जानकारी, विना सूचना, विना स्वार्थ, विना आशा, हृदयदेखि उर्लेकाे भाव हाे माया । जुन सम्बन्ध निश्चल , पवित्र , चाेखाे हुन्छ र जुगाैजुग रहिरहन्छ त्यहि हाे माया । जसलाई चाहेर पनि भुल्न सकिँदैन,राेकेर पनि राेक्न सकिदैन त्यही हाे माया ! जुन आँखाले हरेक कुरा सुन्दर देख्छ, जहाँ हरेक कुरा स्वीकार्य हुन्छ त्यही हाे माया ।
यस्ताे अदृश्य शक्ति बनेकाे माया बेच्ने बजार बनेकाे छ भ्यालेन्टाइन डे । हाम्राे समाजमा नयाँ संस्कार बनेकाे याे भ्यालेन्टाईन डे न त हाम्राे सभ्यता हाे,न त संस्कृति । यस पश्चिमेली सभ्यतालाई अँगालेर युवापुस्तामा देखिएकाे विकृति र विसङ्गतिप्रति अचम्म लाग्छ । याे दिनदेखि माया गर्छु भनेर बसेकाहरुले के साच्चिकै माया गरेका हुन् त ? के यिनकाे माया जीवन्त रहन्छ त ? केे यिनकाे मायामा सत्यता छ त ? के यिनले अन्तरमनदेखि माया गरेका हाेलान् त ? अँहँ हाेईन भन्छ मेराे मन । याे त देखावटी माया हाे,२/४ दिनका लागि , रमाइलाेका लागि गरिएकाे माया हाे याे । यसले कतै हाम्राे जीवन अधाेगतितिर धकेलिरहेकाे त छैन ? हाम्रा संस्कार सभ्यतालाई भत्काएर सारा जीवन पीडादायी बनाएकाे त छैन ? साेचनीय विषय ,रहेकाे छ ।
नयाँ पुस्तामा देखिएकाे प्रेम कच्चा छ वा सच्चा छ , बुझ्नु जरुरी छ ।यही प्रेम जीवन हाे भने यही प्रेम मृत्युकाे कारक पनि बन्न सक्छ । प्रेम ओखति हाे भने प्रेम दुर्गति पनि बन्न सक्छ । भ्यालेन्टाइन डे काे दिन गुलाब दिदैमा प्रेम गरेकाे भन्न मिल्छ त ? सच्चा प्रेम त मनले गरिन्छ , आँखाले गरिन्छ , हृदयले गरिन्छ । दुःख सुखमा सदाबहार रहन्छ प्रेम । प्रेमिल मन त सधै सफा रहन्छ , स्वच्छ रहन्छ , निर्मल र कञ्चन हुन्छ । दयालु मन र मायालु व्यवहार झल्किन्छ सच्चा प्रेममा । त्यसैले प्रेमिल मन गंगाकाे पानीजस्तै पवित्र हुन्छ । प्रेम गर्नेकाे मन सफा र शुद्ध हुन्छ । शुद्ध मनमा परमेश्वरकाे बास रहेकाे हुन्छ । धनदाैलत , माेजमस्ती र ऐस आराममा प्रेम नभेटिन पनि सक्छ । देखावटी सुन्दरतामा प्रेम नहुन पनि सक्छ, राताे गुलाबमा प्रेम नहुन पनि सक्छ । मैलाे मनले दिएकाे सुकिलाे गुलाबकाे के अर्थ ? जेहाेस् ,प्रेम विनाकाे जीवन निस्सार,पट्यारलाग्दाे र निरर्थक हुन्छ । जीवन ज्यूनकालागि प्रेम अत्यावश्यक चिज हाे , प्रेम जीवन हाे, प्रेम संसार हाे , प्रेम ज्ञान हाे,प्रेम विज्ञान हाे ।त्यसैले प्रेम त गराै तर अन्तर हृदयदेखि गराै ,,,मुटुबाट उर्लिएकाे प्रेमकाे भेल बगाउन भ्यालेन्टाइन डे नपर्खिऊ , र भ्यालेन्टाइन डे पर्खिएर बसेकाे प्रेमप्रति विश्वास नगराैँ । सबैले सबैलाई प्रेम गराैँ , प्रेमप्रति आस्था , विश्वास र इमानदार बनाैँ । सबैकाे जीवन प्रेममय बनाेस् , प्रेमदिवशकाे हार्दिक शुभकामना !!!** तानसेन,पाल्पा ।
अघिल्लो लेखमाविशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे : प्रधानमन्त्री
अर्को लेखमाललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले माग्यो नेपाल र भट्टराईबारे निर्णय